Ch 14 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 14 Matthew
14:1 Amin'izany andro izany, Heroda mpanapaka nandre ny vaovao momba an'i Jesosy.
14:2 Ary hoy izy tamin'ny mpanompony: "Izao no Jaona Mpanao-batisa. Efa nitsangana tamin'ny maty, ary izany no mahatonga fahagagana ireo asa lehibe ireo. "
14:3 Fa Heroda efa nahazo ny John, dia namatotra azy, dia nandatsaka azy tao an-tranomaizina, noho ny amin'i Herodiasy, ny vadin'ny rahalahiny.
14:4 Fa Jaona efa nilaza taminy i, "Tsy Mety aminareo va ny manambady azy."
14:5 Ary na dia nitady hamono azy, saingy natahotra ny vahoaka, satria nihevitra an'i Jesosy ho mpaminany.
14:6 Avy eo, tamin'ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i Heroda, ny zanakavavin'i Herodiasy nandihy eo aminy, Ary Heroda.
14:7 Ary noho izany dia nianiana izy fa hanome azy na inona na inona hangatahiny ny azy.
14:8 Fa, rehefa nanoro hevitra-dreniny, hoy izy, "Omeo ahy eto, an-dovia, ny lohan'i Jaona Mpanao-batisa. "
14:9 Ary ny mpanjaka nalahelo indrindra. Fa noho ny fianianany, ary noho ny niara-nipetraka nihinana teo aminy, dia nasainy ihany izy mba homena.
14:10 Ary dia naniraka hanapaka ny lohan'i Jaona tao an-tranomaizina.
14:11 Ary ny lohany nentina an-dovia, ary dia nomena ilay zazavavy, ary izy nitondra azy ho ao amin-dreniny.
14:12 Ary avy ny mpianany nanatona dia naka ny faty, ary dia nandevina azy. ary tonga, izy ireo nilaza izany tamin'i Jesosy.
14:13 Ary rehefa nandre izany Jesosy, dia lasa niala teo sambo, ny efitra toerana irery. Ary ny vahoaka efa nandre izany, dia nanaraka azy nandeha an-tongotra avy amin'ny tanàna.
14:14 Ary nivoaka, dia nahita vahoaka betsaka, ary dia naka niantra azy, ary nanasitrana ny marary.
14:15 Ary rehefa hariva ny andro tonga, ny mpianany nanatona Azy, nanao hoe:: "Izao no iray toerana foana, sy ny fotoana izao lasa. Nandrava ny vahoaka, amin'izay mba, amin'ny alalan'ny hivarina any an-tanàna, mba hividy hanina ho azy. "
14:16 Fa hoy Jesosy taminy:: "Tsy tokony handeha. Omeo zavatra hohanina ny tenanareo. "
14:17 Ary ireo namaly Azy, "Tsy manana na inona na inona eto, afa-tsy mofo dimy sy hazandrano roa. "
14:18 Ary hoy izy taminy, "Ento atỳ amiko izany."
14:19 Ary rehefa nandidy ny vahoaka betsaka hipetraka eo amin'ny ahitra, dia nandray ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, ary eto mijery ny any an-danitra, dia nitso-drano dia novakiny ka natolony ny hanina ho an'ny mpianatra, ary avy eo ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka.
14:20 Dia nihinana izy rehetra ka voky. Ary izy ireo nitondra ny sisa tavela: roa ambin'ny folo harona moa no sombintsombiny.
14:21 Ary ny isan'ireo izay nihinana dia dimy arivo lahy, afa-tsy zaza amam-behivavy.
14:22 Ary Jesosy avy hatrany nanery ny mpianany mba hiakatra an-tsambokely, ary mba hialoha azy amin'ny namakivaky ny ranomasina, -pandràvany ny vahoaka.
14:23 Ary rehefa noravany ny vahoaka, dia niakatra irery teo-tendrombohitra hivavaka. Ary nony hariva ny andro tonga, tao amin'ny mangingina Izy teo.
14:24 Fa teo afovoan'ny ranomasina, ny sambo dia misamboaravoara momba ny onja. Fa ny rivotra dia namely azy.
14:25 Avy eo, tamin'ny fiambenana fahefatra amin'ny alina, dia nankeo amin'izy mivady, nitsangantsangana teny ambonin'ny ranomasina.
14:26 Ary nony nahita Azy nitsangantsangana tambonin'ny ranomasina, izy ireo tsaina, nanao hoe:: "Tsy maintsy ho zavatra hafahafa iny." Ary ny vahoaka niantso, noho ny tahotra.
14:27 Ary niaraka tamin'izay dia, Jesus spoke to them, nanao hoe:: “Have faith. Izaho. Aza matahotra."
14:28 Then Peter responded by saying, "Tompo ô, if it is you, order me come to you over the waters.”
14:29 Ary hoy izy:, “Come.” And Peter, descending from the boat, walked over the water, so as to go to Jesus.
14:30 Na izany aza tena, seeing that the wind was strong, dia natahotra. And as he began to sink, dia niantso, nanao hoe:: "Tompo ô, save me.”
14:31 And immediately Jesus extended his hand and took hold of him. Ary hoy izy taminy:, “O little in faith, why did you doubt?"
14:33 Then those who were in the boat drew near and adored him, nanao hoe:: "Marina tokoa fa, you are the Son of God.”
14:34 And having crossed the sea, dia tonga tany amin'ny tany Genesaret.
14:36 Ary nangataka azy, so that they might touch even the hem of his garment. And as many as touched it were made whole.